नामलाई हृदयबाट बोलायौ भने आफै हजुर भन्दै आउनेछ : समर्थ रामदास
२०७६ पौष २४ बिहिबार, नामको बारेमा छत्रपति शिवाजीका गुरु समर्थ रामदासजीले ग्रन्थ दासबोधमा भनेका छन्,' नामलाई तिमीले हृदयमा दह्रो गरेर पक्रियौ भने नामी आफै आउने छ। जसको नाम पुकार्नेछौ, उसले आफैं-आफ हजूर भन्ने छ। एक-दुईपटक नाम लिंदा आउँदैन, तर जब रामसिंह-रामसिंह भनिरह्यौ भने उसले पनि ज्यू-हजुर अवश्य भन्ने छ । ऊ आफै आउने छ जब तिमीले नाम जप्ने छौ । जब नाम हृदयमा छ भने नामी पनि हृदयमा नै छ ।' ... बाँकी अंश»
ओली राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजी सरह चलाउने राणापछिका पहिलो प्रधानमन्त्री
२०७६ पौष २४ बिहिबार, ‘नेपाल ट्रस्ट ऐनमा केही महिना पहिले भएको संशोधनको आडमा ‘कानुन बमोजिम’ भएको दाबी गर्दै सरकारले संसदीय बहुमतको दुरुपयोग र कानुनी राज्यको मर्यादा तोडेको छ । यदि ऐनको पूर्ववत उद्देश्य संशोधनबाट परिवर्तन गरिएको छैन भने ट्रस्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले यति समूहको अनुकूल हुने गरी सरकारले जेजस्तो सम्झौता गरेको छ, त्यो नितान्त व्यापारिक प्रयोजनका लागि हो र त्यसबाट केही राजस्व मात्र सरकारले पाउँछ । कानुनी राज्य अर्थात कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । तर कानुन कस्तो छ, कसरी बनेको छ वा परिवर्तन भएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वको हुन्छ । सत्तारूढ दलले संसदीय बहुमतको उपयोग गरी आफ्नो अनुकूलताका लागि जस्तो पनि कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने कुरा लोकतन्त्र सम्मत होइन । खराब कानुन स्वीकार्य हुँदैन । यसको करेक्सन प्रणालीगत अर्थात संसद वा न्यायालयबाट हुन्छ, हुँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन । यसका लागि नागरिक आन्दोलनमै निस्कन पर्ने हो भन्ने संसद, संविधान वा राजनीतिक प्रणालीको के अर्थ रह्यो ? ... बाँकी अंश»
रोकिएलान् त ट्रम्प ?
२०७६ पौष २४ बिहिबार, काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीचको तनाव पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको छ। तेस्रो विश्वयुद्ध नै यो तनावको कारण शुरू हुने हो कि भन्ने आशंका एकाथरी मानिसले गरेका छन्। त्यसो त उनीहरूको बीचमा युद्धको शुरूवात नै भइसकेको छ। प्रत्यक्षरुपमा इरानमा आक्रमण नगरे पनि अमेरिकाले दोस्रो दर्जाका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिलाई मारेसँगै उनीहरूको बीचमा तनाव बढेको हो। ... बाँकी अंश»
२०७६ पौष २३ बुधबार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रका नाममा संयमित संवोधन गरेका छन् । प्रायः आक्रामक शैलीमा आइरहने ट्रम्पले बुधबार राति राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दै संयमित शैलीमा अमेरिका अर्थ र सैन्य शक्तिमा मजबुद रहेको बताए। ... बाँकी अंश»
गुरुलाई तर भन्दा नर्क भोग्नुपर्यो नारदले
२०७६ पौष २३ बुधबार, काठमाडौं । वेदव्यासकोमा उनका पुत्र शुकदेव मुनि आत्मज्ञानका लागि आए। तब वेदव्यासले आत्मज्ञान चाहिए तिमि फलानो छन्दको, फलानो स्कन्धलाई पढ वा फलानो ग्रन्थको अध्ययन गर भनेनन् । उनले भने,' हे शुकदेव! तिमि यसको प्राप्तिको लागि एक जीवित, समयका सद्गुरु भएको ठाँउमा जाउ ।' ... बाँकी अंश»
हात्तीलाई मदिरा पिलाए घुम्न निस्किए राजा
२०७६ पौष २२ मंगलबार, काठमाडौं । महाभारतको शान्ति पर्वका अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिरले पितामह भीष्मसँग शान्ति पाउने उपाय बारे सोधे | तब भीष्मले भने- हे पुत्र ! एक समय एक राजाले आफ्नो हात्तीलाई खूब मदिरा पिलाए र त्यसमा बसेर घुम्न निस्किए । मार्गमा राजालाई हात्तीले लडाएर आक्रमण गर्न खोज्यो | राजा हात्तीसँग भयभीत भएर प्राण बचाउन भागे । राजा भाग्दा भाग्दै अचानक एक इनारमा झरे , इनारको माथि एक पीपलको रुख थियो त्यसको जरा इनारमा फैलिएको थियो । ... बाँकी अंश»
२०७६ पौष २२ मंगलबार, काठमाडौं । भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारप्रसार गर्न अष्ट्रेलिया पुगेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेतृत्व गरेको र्‍यालीलाई सिड्नीस्थित ओपेरा हाउसको सुरक्षाकर्मीले रोकेको छ । ... बाँकी अंश»
एक श्वासमा भगवानको नाम छुट्दा रोए कबीर
२०७६ पौष २१ सोमबार, महात्मा कबीर गृहस्थ जीवनमा सम्पूर्ण कार्य गर्दै पनि सदा भगवानको नाम सुमिरण गर्थे । उनको प्रत्येक श्वास भगवानलाई समर्पित थियो। श्वास-श्वासमा उनी भगवानको पावन नामको सुमिरण गर्थे। ... बाँकी अंश»
दुईतिहाईको शासनमा व्यक्ति-व्यक्तिबीच भागबण्डा: देशलाई ठूलो क्षति !
२०७६ पौष २१ सोमबार, नेकपाको दुइतिहाइ सरकारको शासनमा अति भागबण्डाको पछिल्लो अवस्थालाई बुझाउने सन्दर्भका विभन्न माध्यममा प्रकाशित समाचारका संक्षिप्त दुइ प्रसंग – ... बाँकी अंश»
पाँच सय बर्ष अघि नेस्त्रेदमसले गरेको भबिष्यवाणी र विश्वयुद्ध उन्मुख बर्ष २०२०
२०७६ पौष २१ सोमबार, नेस्त्रेदमसले २०२० मा विश्वको आर्थिक अस्थिरताको वर्ष हुन सक्छ भनेका छन्। नेस्त्रेदमसको भविष्यवाणी मान्ने हो भने यस समय लगभग संसारका सबै ठूला देशहरुको आर्थिक अवस्था धेरै गाह्रो छ। गत केही दशकमा आफ्नो तीव्र वृद्धि दरको साथ विश्वको ध्यानआकर्षण गर्ने चीन र भारत पनि कठिन आर्थिक अवस्थाको सामना गरिरहेका छन्। नेस्त्रेदमसले भनेका छन् आर्थिक मामिलालाई लिएर चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्व हुन सक्छ । ... बाँकी अंश»
सेठकी छोरीसँग भुतुक्कै भएका राजकुमारले किन मोडे मुख?
२०७६ पौष २० आइतबार, काठमाडौं । एक राजकुमार सेठकी छोरीलाई देखेर मोहित भए। उनले खान-पिउन सबै छोडिदिए अनि दिन-रात चिन्तित रहन थाले। जब राजालाई छोराको यस हालत बारे खबर पुग्यो तब सेठलाई बोलाएर राजाले भने, मेरो छोरा राजकुमार तिम्री छोरीको यादमा चिन्तित भएर प्राण त्याग्न लागेका छन्। यसकारण आफ्नी छोरीको विवाह मेरो छोरासंग गरिदेऊ।' ... बाँकी अंश»
अमेरिकाले बिथोलेको मध्यपूर्व, अब के हुन्छ ?
२०७६ पौष २० आइतबार, काठमाडौं। सानोतिनो तनाव सृजना हुनु मध्यपूर्वको लागि नौलो कुरा होइन। तर, गत बिहीबारदेखि भने मध्यपूर्वको तनाव निकै बढेको छ। यसले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउनेसम्मको अड्कल मानिसहरुले गर्न गर्न थालेका छन्। इरानी फौजको विशेष दस्ता क्विडका प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकाको आक्रमणमा मारिएसँगै मध्यपूर्वको शान्ति बिथोलिएको हो। इराकको विमानस्थलभन्दा बाहिर कारमा रहेका उनी अमेरिकाको आक्रमणमा मारिएका हुन्। यससँगै विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंगका साथै विभिन्न किसिमको आशंका पनि फैलिएका छन्। ... बाँकी अंश»
तुलसीदासले किन भने अरब-खरबको सम्पत्तिको के काम ?
२०७६ पौष १८ शुक्रबार, सन्त ब्रह्मानन्दले भनेका छन् सन्तहरुमा पनि कसै-कसैले मात्र यो कुरालाई सम्झन्छन् । गगनको बिच अमृतको कुवा छ जसबाट सदा अमृत टप्किरहेको छ । अपांग पुरुष विना सीढि त्यो अमृतलाई पिइरहेको छ । नबजाइ घंटा, शख, मृग आदि आफै बजिरहेका छन् त्यसलाई बहिराले सुनेर मस्त भइरहेको छ । बिनाभूमि महल बनेको छ जसलाई अन्धाले देखेर आनन्दित भइरहेको छ । भोजन बिनै जीव बाचिरहेको छ । ब्रह्मानन्द तथा संतहरुको यो कुरा अनुभव गर्नेले मात्र बुझ्छन्। ... बाँकी अंश»
राजनीति गर्न उमेरले छेक्छ ?
२०७६ पौष १८ शुक्रबार, काठमाडौं। राजनीति र उमेरको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। राजनीतिमा पाको उमेरका मानिसहरु जाँदा मुलुकको विकासमा चाहेको जति योगदान दिन नसक्ने भन्दै उनीहरुको आलोचना हुने गरेको छ। केहीले भने आवश्यकताभन्दा कम उमेरको मानिसलाई पनि मुलुकको जिम्मेवारी दिनुले उनीहरुले गरेको निर्णय दूरदर्शी हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै यसको विषयमा बहस हुने गरेको छ। ... बाँकी अंश»
युधिष्ठिर धर्मराज बन्ने जग बसेको पाठशालाको त्यो पहिलो दिन
२०७६ पौष १७ बिहिबार, काठमाडौं। धर्मराज युधिष्ठिर जब शुरुमा पाठशाला गए, त्यहाँ यो पढाईयो-'सत्य बोल, रिस नगर।' ... बाँकी अंश»
राष्ट्रपतिको असंवैधानिक श्रृंखलामा बीबीसीका ६ बुँदा
२०७६ पौष १७ बिहिबार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देश भित्रमात्र होइन उनका आलंकारिक घोराबाट असंवैधानिक रुपले कार्यकाकारिणीको प्रयोग गर्न खोजेको कुरा संसारभरी नै पुगिसकेको अवस्था छ । बीबीसी नेपाली सेवाको ३ अप्रिल २०१९ को एउटा रिपोर्ट । यो रिपोर्ट आफ्नो कामको आलोचना भएकोमा गुनासो गरिन् त्यो सन्दर्भमा नै थियो । राष्ट्रपतिको उक्त भनाइलाई कतिपयले उनी आफैँ विवादमा तानिएका केही विषयहरूसँग जोडेर हेरिरहेका छन भन्छ यो रिपोर्ट । यो रिपोर्ट मार्फत संसार भरी पुगेको उनका कामबारेका बुँदाहरु यस्ता छन ... बाँकी अंश»
सामाजिक रुपान्तरणको दिशामा साउदी
२०७६ पौष १७ बिहिबार, काठमाडौं। विश्वको सबैभन्दा कठोर मुस्लिम कानून भएको मुलुक कुन होला ? यसको उत्तर धेरैले सहजै दिन सक्छन् –साउदी। कट्टर धार्मिक आस्थाको कारण यो मुलुकमा निकै कठोर कानून छ। जसमा विशेषगरी महिला अधिकारको हनन हुँदै आएको छ। अझ भनौं धेरै सामान्य लाग्ने कुराहरु पनि साउदी अरेबियामा अपराध हुन्छ। त्यसैले मानव अधिकारको मामिलामा साउदी अरेबिया बदनाम बन्दै आएको छ। ... बाँकी अंश»
राष्ट्रपति विवादमा तानिएका केही विषय
२०७६ पौष १७ बिहिबार, गत दशैँमा राष्ट्रपतिले लगाइदिएको टीकाले पनि उनलाई निक्कै आलोचित बनाएको थियो । उनले टीका लगाइदिएका केही तस्बिरहरू दशैँको टीका लगत्तै ‘भाइरल’ भए । सामाजिक सञ्जालमा त यो विषय केही सातासम्म चर्चामा रह्यो । दशैँमा राजतन्त्र कालमा राजाले लगाइदिने जस्तैगरि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतले टीका लगाइदिने चलनकै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन् । अझ कम्युनिस्ट राजनीतिबाट सत्तामा आएकाहरूले त्यसो गर्नुलाई धेरैले निको मानेका थिएनन् । गत दशैँमा केही बहालवाला र पूर्व विशिष्ट अधिकारीहरूले भण्डारीको हातबाट टीका लगाउँदा उनको अगाडि घुँडा टेकेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए । त्यत्ति मात्र होइन कतिपय अधिकारीहरू निक्कै अप्ठ्यारो गरेर टीका लगाउन झुकेको समेत तस्बिरहरूमा देखिन्थ्यो । कुर्सीमा बसेकी राष्ट्रपतिसँग अरु विशिष्ट अधिकारी र पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले घुँडा टेकेर र झुकेर टीका लगाएको दृश्यलाई धेरैले ‘अशिष्ट र अमर्यादित कार्य’ का रूपमा अथ्र्याएका थिए । त्यसो हुनुको पछाडि राष्ट्रपति कार्यालयबाटै सार्वजनिक तस्बिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित केही विशिष्ट पदाधिकारीका लागि चाँहि कुर्सीको व्यवस्था गरिनु र अन्यलाई हटाइनुलाई धेरैले कारण मानेका थिए । गणतन्त्र नेपालमा पनि राजतन्त्र कालमा भन्दा पनि बढी विभेद र पक्षपात गरिएको रूपमा धेरैले त्यसलाई लिएका थिए । ... बाँकी अंश»
भगवान कृष्णका अनन्य उपासक सूरदासले आफैलाई किन भने नमक हरामी ?
२०७६ पौष १६ बुधबार, भगवान कृष्णका अनन्य उपासक र ब्रजभाषाका श्रेष्ठ कवि सूरदास भन्छन् - 'हे प्रभु! तपाइले चौरासी लाख जुनीबाट छुटाएर मलाई मनुष्य जन्म दिनुभयो। आमाको गर्भमा मेरो रक्षा गर्नुभयो। जन्म लिनुभन्दा पहिल्यै आमाको स्तनमा दूध भरिदिनुभयो, नानाप्रकारका खानेकुराहरू मेरो लागि बनाइ दिनुभयो । हेर्नका लागि आँखा, सुन्नका लागि कान, सुँघ्नका लागि नाक, हिंड्नका लागि खुट्टा, काम गर्नका लागि हात बनाई दिनुभयो । यति उत्तम शरीर तपाईले मलाई दिनभयो । तर मैले तपाईलाई बिर्से, म यस्तो नमक हरामी हूँ। जसरी गाँउका सुगुर मैला खोजि खान गाउँ-गाउँ घुमिरहन्छ, उस्तै म पनि दाल-भातको लागि चारैतिर दगुरिरहन्छु । जो भगवानदेखि विमुख छ, जसले भगवानलाई मान्दैन उसको त म दिनरात चाकरी गर्छु, तर जो भगवानका भक्त छन् अनि जुन सन्तलाई साष्टांग दण्डवत् गर्नु भनेर गीता, रामायणमा लेखेको छ, तिनीहरु भएको ठाँउमा नगएर दिनरात भगवानदेखि विमुख रहनेहरूका अघिपछि चक्कर काटिरहन्छु ।' यसकारण म जस्तो नमक हरामी अरु कोहि छैन। ... बाँकी अंश»
भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्रीका बोली: पहिले धेरै विरोध अहिले धेरै बचाउ !
२०७६ पौष १६ बुधबार, प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो यो दोस्रोकालको सुरुदेखिनै भ्रष्टाचारका विरुद्ध सबैभन्दा बढी बोल्ने व्यक्ति वा पदाधिकारी भनी चिनिन्थे । तर उनको शासनको कार्यकाल जति बढदै गयो र भ्रष्टाचार पनि बढ्दै आयो त्यसमा उनी बचाउ गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेछन् । पछिल्ला कतिपय उदाहरणहरु यसका साक्षी हुँदै गरेका पाइयो । ... बाँकी अंश»